အမျိုးသမီးသီးသန့်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » အမျိုးသမီးသီးသန့်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲရန်
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Nov 23, 2011 in Ideas & Plans | 37 comments
စိတ်ဝင်စားသူ..။ ကူညီမဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..။
ကျမအနေနဲ့ ဒါဟာ..လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်..
လူဦးရည်နဲ့ ကာစီးရေ မညီမျှသေးတဲ့ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ထင်မိပါတယ်။
တဘက်ကို ကြည့်ရင်လူသားခြင်း..နှမသားခြင်းမစာနာဘူးလို့့လည်းမပြောနိုင်သလို
တချို့ ကလည်းမရည်ရွယ်ပေမဲ့ …လူသားနဲ့ ကား ၀န်မမျှတဲ့ အခါ…စိတ်အနှောက်ယှက်လည်း
အမျိုးသမီးသီးသန့်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲရန် အစီအစဉ်များချမှတ်………….
ယနေ့ ခေတ်၌ အများပြည်သူလူထုတို့ သည် ရုံးလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ရာတွင် ဘတ်စ်ကားများ ၊ ၀န်ထမ်းကြို ပို့ ကားများ ကို အသုံးပြုလျက်ရှိကြသည်။
သို့ သော် ဘတ်စ်ကားများ ကိုသာ ပိုမိုသုံးစွဲကြသည်။သို့ ရာတွင် ဘတ်စ်ကားဖြင့် ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်းသွားလာနေရသော အမျိုးသမီး များ အား
အချို့ သော မသမာသူ အမျိုးသားများ က အနှောက် အယှက် ပေး၊ ထိခိုက် စော်ကား ကာ ထိကပါး ယိကပါး ပြုနေကြောင်း မီဒီယာများ ၊ ဂျာနယ်များ တွင် မကြာခဏ တွေ့ ရှိရပါသည်။
သို့ ပါ၍ အမျိုးသမီးများ ထိုအန္တရာယ်များ မှ ကင်းဝေးကာ အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာ သွားလာနိုင်ရန် ဒေါ်ကေခိုင်အောင်ခင် မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကုန်းလမ်း ပို့ ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးအား
သီးသန့် မော်တော် ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲ ပေးရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။ ထို့ အပြင် လိုအပ်ပါက အမျိုးသမီး ယာဉ်မောင်း နှင့် အမျိုးသမီး ယာဉ်အကူ ထားရှိနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
ထိုနည်းအတူ သွားလာရေး သက်သာချောင်ချိစေရန် အတွက် လည်း ယာဉ်လိုင်း တစ်လိုင်းကို တစ်ပတ် လျှင် နှစ်ကြိမ်ခန့်ယဉ်စီးခ အခမဲ့ ဖြစ်စေရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ြ
ဒေါ်ကေခိုင်အော်ခင် မှ အလှုငွေများ ထည့်ဝင် လှုဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ ပါ၍ မြန်မာအမျိ်ုးသမီး လေးများ ခရီးသွားလာရေး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ သက်သာချောင်ချိစေရန် ပါဝင် ကူညီပေးပါရန် အလှုရှင်များ အား လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
မထသ ၊ ပါရမီ ယာဉ်လိုင်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် ပါဝင်ကူညီ လှုဒါန်းလို ပါက ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်း – 01-510146 , 09-4927832
ကဲ ရွာထဲက ဘုစ် ကား စီးသူ အမျိုးသမီးများခင်ဗျာ
စေတနာ သဒ္ဒါတရားပေါက်တယ်ဆိုရင် ဘွားရွှေ ရေးပေးတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးကို ဆက်ပြီး လှူဖို့ သာ ပြင် ၊ ပြီးရင် သက်သက်သာသာချောင်ချောင်လည်လည်လေး စီးကြဖို့ သာ ပြင်ထားပါ နော်
(သည်တခါတော့ ချောင်းဆိုးတာပါလေ ဆိုပီး ရှောင်ထွက်မသွားရဲတော့ပါ…)
သည်လို ရှိတယ်ဗျ…သည် approach ဟာ sexual discrimination ဘက်ကို ရောက်လွန်းတယ်
လို့ ဝေဖန်ပါရစေ ….
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ယောက်ျားတွေ ဟာ သိက္ခာ စောင့်စည်းကြပါတယ်
မိဘကောင်းတယောက် …..ခင်ပွန်းသည်ကောင်း တယောက် …သားကောင်းတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ …
၀န်ခံပါတယ် …တကယ့်တကယ်တမ်း … စုန်းပြူးတွေလည်းရှိပါတယ်…
….စုန်းပြူးတွေလည်း ရှိလို့ဆြာဘီလူးတို့ ဆုံးမခဲ့ကြတာပေါ့ ….. သို့သော် သည် စုန်းပြူးတွေဟာ …
(လစ်လို့ လုပ်တာလား လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို ဘတ်စ်ကား ပတ်စီးနေတာလား)က
အရေအတွက် ပမာန ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ ….
သည်လူတွေကို လူဆိုးလို့ သတ်မှတ်ရင် အထက်ကပြောခဲ့တဲ့လူကောင်း Vs လူဆိုး
(၅၀-၅၀လား …၆၀-၄၀လား ၉၀-၁၀လား) စာရေးသူရော ဒေါ် ကေခိုင်အောင်ခင် ရော သိပါသလားခင်ဗျာ..
ကျနော်ကတော့ မသိပါ ….. တကယ်က သိအောင်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတာပါ…
ဥပမာ ၈၀-၂၀ ဆိုပါစို့ရဲ့ …. သည်လိုလုပ်မယ့်အစား … သဂျီးပြောသလို ထောင်ဖမ်းနဲ့နည်းတွေ
နောက်မလုပ်ရတော့ဘဲ ဆင်ခြင်သွားအောင် နောင်ဂျိန်သွားအောင် ပညာပေးတဲ့နည်းတွေ ပုံလို့ဗျာ
၇၀-၃၀လား ရသေးတယ်နော် …သည်လိုနည်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းလို့….
ကျုပ်က ကမ္ဘာကြီးကတဖက် အရှေ့ကျွန်းကတဖက် နှာကိစ္စပြိုင်ရင် မရှုံးနိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ နေနေလို့
ပြောတာပါ ……သူတို့ကတော့ သည်လို ခွဲခြားခြင်းကို အဖြေလို့ မသတ်မှတ်ဘူးဗျ
သူတို့မှာ ဖြေရှင်းနည်းတွေရှိတယ် ….အတော်လည်း ဆိုးခဲ့တာကိုး ….
ကျုပ်တို့ ဗမာယောက်ျားတွေ ..အဲ့လောက် အဲ့လို မဆိုးဘူးဗျ …..ဆက်ပြီး ဖတ်စေချင်ပါသေးသည်…
ဆက်ရရင် …ဒါဟာ ဖြေရှင်းနည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်လို့ပါ ….သည်လိုပြောရတာဟာ
နှမချင်းစာနာတဲ့လူတွေသည်လိုလူမျိုးတွေ ရန်ကနေ တပြားမှ မရပေမယ့်
ထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွဲ ဖြစ်နိုင်တာကို မမှုဘဲ ဗော်လန်ဒီယာ ကာကွယ်ပေးမယ့် ယောက်ျားတွေကို
စော်ကားရာရောက်တဲ့ solution လို့ မြင်လို့ပါခင်ဗျား ….
သီးသန့် ခွဲထားရအောင် ယောက်ျားထုအားလုံး ဟာ မိန်းမမြင် မနေနိုင်တဲ့ အရိုင်းအစိုင်းမဟုတ်လို့ပါဗျား
ဒုတိယ တချက်ကို ပြောပါမယ် … marketingအရပါ အဲ့သည့်
အမျိုးသမီးသီးသန့်ယာဉ်ကို စီးမယ့် customer ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ သိပါသလား…
ပျမ်းမျှ ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးမှာ ယောက်ျား ရုံးဝန်ထမ်း ၆၀% မိန်းမ ၄၀% ဆိုပါစို့
သည်လို အမျိုးသမီး သီးသန့်ကားတွေ ကိုပဲ စီးမယ့် အမျိုးသမီး ကို အဆိုပါ ၄၀%သော
လူဦးရေ အတိုင်း potential customer ဖြစ်ပေမယ့် အမှန်တကယ် သုံးစွဲသူ user အနေနဲ့
မြင်ကြည့်လို့ ရပါ့မလားဗျာ… ကျနော်တော့ မထင်ဘူးဗျ ……
အချိန်မရလို့ ရုံးနောက်ကျမှာစိုးလို့ ..လို့… လို့ ….နဲ့ မထူးပါဘူး ကျားမ မခွဲခြားတဲ့ကားလည်း
ကိုယ် မှတ်တိုင်ရှေ့ရောက်တဲ့အချိန် ဆိုက်ရင် စီးလိုက်မှာပါပဲ ….ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးထုရော
ဘယ်လောက်ရှိမလဲ တွက်ချက် မှန်းဆ ကြည့်စေချင်ပါတယ်…
နောက်ဆုံးတချက် ပြောပါမယ် …မိသားစု သွားလာကြတဲ့ ကိစ္စတွေမှာပါ…
သားတယောက် သမီးတယောက်ရှိတဲ့ မိသားစု ၄ယောက် အဖြစ် မြင်ကြည့်ပါ
အဖေနဲ့ သားက တစီးစီ. .အမေနဲ့ သမီး ကတစီးစီး ….သွားချင်တဲ့နေရာရောက်ရင်
ပြန်ချိန်းပီးတွေ့ကြ …………မဟုတ်သေးဘူးပဲ …..ခုခေတ်က ဟန်းဖုန်းယဉ်ကျေးမှုလည်း
အတော်ပျံ့နှံ့နေပီဆိုတော့ …. အဲ့သည့်လို လုပ်လည်း အဆင်မပြေစရာ မရှိဘူးပဲ ဆိုပြီး
အလွယ်တွေးရင်တော့ မှားမယ်ထင်ပါတယ်. …………
ထူထောင်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ….ဂွမ်းသွားရင် ဘယ်လိုတာဝန်ယူမယ် ..
မအောင်မြင်ရင် ဘယ်လို recovery planတွေ ထားထားတယ်. …(ယာဉ်မောင်း ယာဉ်အကူတွေ
အတွက် အပါအ၀င်ပါ..) ပြီးတော့ plan B…ဘယ်မှာတုန်းဗျာ…
၂စီးတွဲတွေလုပ်တယ်… သံဇကာတွေခြားပြီး ကျားသပ်သပ် မ သပ်သပ် လုပ်ကြတယ်….
အဲ့သည့်နှာဘူး ရန်က ကင်းလွတ်လို့ ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကနည်းနည်း
သွားရလာရ အဆင်မပြေဖြစ်ရတာက များများမို့ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရဖူးပါတယ်…
ကျနော် ယုံကြည် ကျင့်သုံးတဲ့ အဆိုအမိန့်တခုပါ
တခုခုကို စရင် လုပ်ရင်ဖြင့် .. business မှ မဟုတ်ဘူး…
ဘာမဆို အကျုံးဝင်ပါတယ် ..ကောင်းမွန်တဲ့ plan တခုသည်
သည်အချက်၃ခုကနေ မသွေဖီစကောင်းပါဘူးလို့ ယုံလို့ ချရေးလိုက်ပါတယ်
၁။ Increase the quality of life တဲ့ . ဆိုလိုရင်းက ပိုကောင်းအောင်လုပ်ကြမယ် improve ပေ့ါဗျာ..
၂။ RightaWrong. မှားနေတာကို အမှန်ပြင်မယ်ပေါ့….
၃။ Prevent the end of something good ဗျ. ..ဒါကတော့ defend style ပါ… လက်တလော ကောင်းနေ
အဆင်ပြေနေတာကို ကာကွယ်မယ် ရေရှည်ကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းမယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါ…
အကျဉ်းချုပ်ဆိုရရင် သည် plan ဟာ အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျား …
အကျင့်ပျက်မှုကို တိုက်ဖျက်တဲ့နည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျ. …
စည်းကမ်းပိုင်း မချိုးဖောက်အောင် တားမြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး
ချိုးဖောက်လို့ ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို နည်းသွားအောင်ပဲ လျော့ချပေးတာ
ဒါ ကုထုံးမဟုတ်ဘူး … ပြောရရင် အမြစ်မပြတ်ဘူး ..
၁။ ပြည်သူ့နီတိ။ လူ့ကျင့်ဝတ် ကို သေချာသင်ကြားပို့ချဖို့ ဖော်ဆောင်ဖို့ …အကျင့်ပျက်ရင်လည်း လူထုက ၀ိုင်းဖော်ထုတ်နိုင်အောင်
၂။ နောက်မလုပ်ရဲအောင်(or)နောက်လူ လိုက်မလုပ်ရဲလောက်အောင် မှတ်သားလောက်အောင် အရေးယူဖို့…..။
မဟာ ပုရိသ ၀ါဒီမဟုတ်ပါခင်ဗျား…
ကျနော် တတ်စွမ်းသရွေ့ ဆွေးနွေးသွားပါသည်
မေတ္တာ သံစကာများဖြင့် မခြားစေလိုတယ် …………
ဂီဂီ ပြောမှ သတိရတယ်.. ကိုရီးယားရောက်တုန်းက သူတို့ဆီမှာ အသက် ၁၈လား ၁၉လား မပြည့်သေးပဲ ကလပ်တို့ ဘာတို့နဲ့ သက်ကြီး ရွယ်အိုနဲ့ လိင်မှု ကျူးလွန်တယ်လို့ သံသရ ရှိတဲ့ လူဆို ဖမ်းလို့ ရတယ်တဲ့.. မဟုတ်တာ လုပ်လို့ မိရင်လည်း သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ မျက်နှာကြီးနဲ့ ထည့်ပေးလို့ အသက်မပြည့်သေးဘူး လို့ ထင်ရတဲ့ ကလေးမတွေဆို သွားစ ရဲဘူး ပြောတယ်။ အဲလိုမျိုး.. ပြည်သူ့ အတွက် ဂျာနယ် တခုခုမှာ မျက်နှာကြီးနဲ့ ထည့်ပေးမယ် ဆိုရင်.. မလုပ်ရလောက်ဘူး။
RightaWrong. အစစ် …
တယောက်လောက် ဂွပ်သွားဖူးရင် နောက် ဘယ်ကောင်မှ လုပ်ရဲတော့မှာ မဟုတ်ဝူး …
သို့သော် ဆက်လက် စောင့်ကြည့် ကွပ်ကဲမှု ဖြစ်တဲ့ ..monitoring systemတော့ လိုတာပေါ့နော်…
လုပ်တာတော့ ကောင်းတယ်.. ရေရှည် မထိန်းနိုင်ကြဘူး။ စီမံချက် ရှိတဲ့ အချိန်တော့ ငြိမ်ပိသွားပြီး စီမံချက် ပြီးသွားတဲ့ အခါ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါပဲ.. စီမံချက်ဆိုတာလည်း လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ နဲ့ မလုပ်မှာ စိုးလို့ မဖြစ်မနေ ရှာဖမ်းခဲ့ဆိုတော့ ယာထားချက် ပြည့်မှီအောင် ဖမ်းရပြန်ကော.. အဲဒီတော့ မလှုပ်နဲ့ လှုပ်တာနဲ့ ဟုတ်တာကော မဟုတ်တာကော နီးစပ်တယ် ထင်တာနဲ့ ဖမ်းပြန်ကော.. ရှုပ်ရှက်ကို ခတ်နေတာပါပဲ။
အဲ့လို ၆တလွဲတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပီးပြောရရင်…
ကျနော် အဖမ်းခံရဖူးသဗျ. …
ပြစ်မှုက …ရပ်စီး ခရီးသည်တင်မှုနဲ့ ….ယာဉ်နံပါတ်နဲ့တကွပါ…
အတိအကျပြောရရင် …၅၁လမ်းရုံး က ကွန်ပျူတာဌာနမှာပါ
ကားနံပါတ်နဲ့ အချိန်နေရာနဲ့တကွ ပါဗျာ. ..
လွတ်ချင်တော့ အဲ့သည့် အနှီကားနံပါတ်က သူရို့ ရုံးရှေ့မှာ
ရပ်ထားတဲ့ ကျနော့် နီဆန်းဆန်နီ စူပါစလွန်းလေးဖြစ်တော့သကိုး…
ဒါဂလေးနဲ့ ဘယ့်နှယ့် ရပ်စီး ခရီးသည်(အတွယ်) တင်လို့ရမလဲဗျာ…
ပီး …..လိုင်းကားမဟုတ် အိမ်ကားဟုတ်နေတာကို….
သူရို့သုံးတဲ့ system က ခွဲခြား မသိဝူးတဲ့လားဗျာ …
computer industry မှာနေတဲ့ ဂီဂီ အတော် လေသွားပါသည်..
အနှီ သတ္တ၀ါတွေ သုံးနေသော system သည် အတော် ၆၃မကျ ဟု၍လည်းကောင်း….
အဆိုပါ systemတွေကို တင်ဒါဈေး ..blah blah blah နှင့် အကြံအဖန်
ရေးပေးသော အသားထဲမှ လောက်ကောင်များအားလည်းကောင်း
အဆိုပါ စစ်စတမ် ကောင်းအိဆိုးအိ ဆိုတာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမပြနိုင်သော ၀န်ထမ်းများအား လည်းကောင်း…
မှားနေမှန်းသိလျက် မပြင်ဆင်ကြသော တာဝန်မယူသော မယူရဲသော အရာရှိဆိုသူများ..
(အရာရှိဆို အထင်ကြီးမယ် …. မော်မဖူးရဲဖြစ်မယ်များ ထင်သလားဆြာတို့
မှားမယ်နော့် public servant အကြီးစား ဟုသာ ယူဆကြောင်း)
အားလုံးကို ဂါရဝေါစ နိဝါရောစ တရား လက်ကိုင်ထားပီး ကြိုတင်ခွင့်တောင်းအပ်ပါသည်
ဆဲခွင့် ပြုပါခင်ဗျား …..
မေရိုး ရီးတွေ ခွေးမတားရီးတွေ….
ကြုံလို့ လက်တို့ပါရစေ …
ဂီ့ သယ်ရင်းတယောက် ကားလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖို့
သူ့မြို့လေးက ဆင်းလာပါတယ်..သူ့ကားလည်း ရန်ကုန်မလာပါ…
သူ့ဗင်န် လေးက ဘယ် ဟိုင်းလတ်နဲ့ ပြိုင်မောင်းတယ် ဆိုတာမျိုး
မထားသင့်တဲ့ ဒီပါ့မန့်ကြီးမှာ စာရင်းဝင်နေကြောင်းပါ
လူဂျီးဆိုတဲ့ ပြိတ္တာ၇ီးက ပြောပါတယ် ဆော ဒီးတဲ့ ….ကွန်ပြူတာမှားလို့တဲ့
ဟုတ်ကဲ့ ….မှားယွင်းတွက်ချက်တဲ့ ကွန်ပြူတာ ..ကမ္ဘာ့ ပဂေးကြီးတွေ လာကြည့်ကြစမ်းဘာဗျာ
အဲ စိတ်လျှော့ကိုအင်ကြီး စိတ်လျှော့
ငဇာဂီ ရေ ။
နင် ငါ့ အယူအဆတွေကို ဘာလို့ ခိုးချထားတာလဲ ။
အထက်ပါ Post ပါ အကြောင်းအရာကို လုံးဝ ကန့် ကွက်တယ် ။
အားလုံးသော ယောကျာင်္းတွေလည်း ဒီ အရသာကို ကြိုက်ပေမဲ့ငဇာဂီ ပြောသလိုပဲ
“..ပြည်သူ့ နီတိ။ လူ့ကျင့်ဝတ် ကို သေချာသင်ကြားပို့ချဖို့ ဖော်ဆောင်ဖို့
…အကျင့်ပျက်ရင်လည်း လူထုက ၀ိုင်းဖော်ထုတ်နိုင်အောင်ကူညီဖို့အားပေးဖို့။
၂။ နောက်မလုပ်ရဲအောင်(or)နောက်လူ လိုက်မလုပ်ရဲလောက်အောင်
ဆိုတာကို လုံးဝ ထောက်ခံပါတယ် ။
သိပ်တော်တဲ့ ဂီ့.. သိပ်တတ်တဲ့ဂီ့..
ကိုရင်တို့ ပေါက်ပေလူးဂီအီးမှော်စည် သိုင်းညီနောင်
လူပျို ခုနှစ်ဖော်လည်း ရွာထဲက အပျိုချောတွေ ခိုက်နေတာ.. အဟီး..
တကယ်က အဲ့လို အမျိုးသမီးသီးသန့် ဘတ်စ်ကားဆွဲတာ..
ခုဘတ်စ်ကားတွေပဲ များပြီး ချောင်လို့ လူခုံစေ့ထိုင်နိုင်လောက်အောင်
This is justasexual discrimination.
Yes, It isasexual discrimination.
လိင်ခွဲခြား၍ မတရား ပြုမူမှု ပါ ။
တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေ တကယ် စိုးမိုးရင်
အမျိုးတမီးတီးတန့်ကား ထုတ်မယ် ထားပါလော့
ဘယ်လိုင်းမှာ ပြေးမတုန်း..ဘယ်လမ်းကြောင်းမှာ ပြေးမတုန်း..ဘယ်နှစီး ထုတ်မတုန်း
သီးသန့် ကားစောင့်စီးရင် အလုပ်မီပါ့မလား.ခရီးတွင်ပါ့မလား..မလွယ်ပါဘူးခင်ညာ
လမ်းကြောင်းတိုင်းမှာ..လိုင်းကားများများစားစား ..မထားပေးနိုင်လို့ ..ထောက်လှမ်းရေးက ပေါ်လာတာ.
ကားပေါ်မှာ..ချောင်ချိနေရင် ဘယ်နှာဘူးမှ လာထောက်လို့ မရဘူး..
အခုက ကြပ်ကြပ်ညပ်ညပ်..မတ်တပ်ရပ်.နှစ်တန်းသုံးတန်းထပ်.ခရီးသည် တစ်လုံး(စင်းလုံးပြည့်)တင်ကြတယ်လေ..
ခရီးတယ်တွေကလဲ ဒါမှမစီးရင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရမှာမို့ ..ကြပ်လဲ တိုးစီးရတော့တာပေါ့ဗျာ..
ရှိတဲ့ခရီးစဉ်တောင် များများစားစား ပြည့်စုံအောင် မစီစဉ်ပေးနိုင်သေးပဲနဲ့ ..နောက်ထပ် အမျိုးသမီး
သီးသန့် ထပ်ထုတ်မယ်ဆိုလျင်..ပလိတ်တတ်ကြီး စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေလော့ဗျာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ
မ.ထ.သ တို့ ..ပါလမီတို့ …ချွေးဧည့်တယ်တို့ ..ဗန္ဒုလတို့ ..ဘာတို့ ..ညာတို့ ရေ
နင်တို့ ကားပေါ် ထောက်လှမ်းရေးပါတာ..ဘဇာကြောင့်လဲ သိကြရဲ့လား….
များများစားစား ချောင်ချောင်ချိချိစီးလို့ ရအောင် ထုတ်ကြစမ်းဘာ.ထုတ်ကြစမ်းဘာ
မရောင်ရာ ဆီလူးနေရင် ဆီကုန်လိမ့်မယ်..ဒါဗျဲ..
ရွာထဲက ကိုရင်တစ်ပါးတောင် ခေါင်းပြတ်တော့မလို့ဆိုလားပဲ..
အဲကတဲက ပြတ်သွားလဲ အေးတာပဲ….ပြိုင်ဘက် တစ်ယောက်လျော့တယ်..
ခုတော့.သူ့ ကြောင့် ငန်းရတာ..ကိုယ်တာ လျော့တယ်..လျော့တယ်
မဆလခေတ်က.. ဘတ်စကားမှာ… အမျိုးသမီးပဲထိုင်ရတဲ့.. သီးသန့်ခုံတွေလုပ်ဖူးတယ်..။
တန်းစီတာတောင်.. စံနစ်တကျမစီ… လုယက်တိုးကြိတ်နေတတ်တဲ့.. မြန်မာတွေနဲ့ ဖြစ်ပါ့မလား… တွေးနေမိတာပဲ..။
တကယ်တော့… မြန်မာပြည်က ကားကြပ်တယ်ဆိုတာ.. တိုကျိုရထားကြပ်တာလောက် မဆိုးပါဘူးနော..
ဒီသတင်းကို မှော်စရာဂရုမေးလ်မှာ ရထားတာတော့တစ်ရက်နှစ်ရက်ရှိပြီ … နောက်ပြီးရေးနေတာလို့ပဲ ထင်တာ .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီး သီးသန့်ယဉ်လိုင်းဆိုတာ … ဖြစ်လာလျှင်တောင်မှ အချိန်ယူရဦးမှာမို့ပါပဲ… ။
သူကြီးက မြန်မာပြည်က ဘယ်နှစ်က ထွက်သွားတာလဲဗျို့။
ကိုင်ဇာ သီချင်းရှိပါတယ်။ ဟိုးတုန်းက ၉ ကား တွေက မိန်းမသပ်သပ် ယောင်္ကျားသပ်သပ်
သံဇကာ ခြားထားပါတယ်။ သီချင်းစာသားလေး ရေးပြမယ်နော။
ရီးဇားဖြစ်ပြီး များမကြာမီ ကျောင်းကားဂိတ်မှာ
၉ ကားကို စီးစဉ် သံဇကာတွေ ဆီးတားထား
ဟိုးဟိုးဆရာ ရှေ့မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းစို့ အချစ်ရာ
ကဲကြည့် သီချင်းတွေက သမိုင်းကို ပြောနေပြီနော သူကြီး။
မြန်မာပြည်မှာ ဟိုးတုန်းကတည်းက ယောင်္ကျားသီးသန့် မိန်းမသီးသန့်
ဘတ်စ် တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုင်ဇာ ကသီချင်းလုပ်ဆိုထားပါတယ် သူကြီးရေ။
တခြားကိစ္စတွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ နေရာတိုင်းမှာ စနစ်တကျ တန်းစီတဲ့ ကိစ္စကို ဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်။
ပိတ်ရက်ဆုံလို့ ကျိုက်ထီးရိုးသွားမယ် စဉ်းစားတိုင်း တောင်တက်ကားကို အလုအယက် တက်ရတာကို စိတ်ညစ်လွန်းလို့ မသွားဖြစ်ဘူး။
အစီအစဉ်လေးကတော့ကောင်းပါတယ်။ နောက်တာလား တစ်ကယ်လားဆိုတာတော့မသိပါ။
နေ့စဉ် အလုပ်ချိန်မှာ လိုင်းကားအလုအယက် စီးနေရတာဆိုတော့ တွေ့ဖူးသလို ကြုံလည်းကြုံဖူးသည်။
ခုလို အိုင်ဒီယာလေးပေါ်တာတော့မဆိုးပါဘူး။ သို့သော် စီးပွားရေးအရ မကြည့်ဘဲ လူမှုရေးအရ
ပရဟိတ လိုမျိုးလေး အမျိုးသမီးတွေ ဘက်ကနေ လုပ်ပေးတာလေးဆို ချီးကျူးလေးစားသင့်ပါတယ်။
မိန်းမတွေနဲ့ အပြိုင် တံထောင်နဲ့ထောင်းပြီး အလုအယက်တိုးကြိတ် တက်နေတဲ့ သူများ မိန်းမများနှင့်
အပြိုင် ထိုင်ခုံအတင်းလုယက်ယူသော ယောက်ျားများ၏ ဒုက္ခများလည်း ကင်းဝေးသွားတာပေါ့လေ။
အကောင်းဆုံး စဉ်းစားမိတာလေးရှိပါတယ်.. တစ်ကယ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ
သက်ဆိုင်သူတွေ ဖတ်မလား၊ မဖတ်ဘူးလားမသိပေမယ့် တစ်ကယ်လုပ်လို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကို စဉ်းစားမိတယ်။ ခုချိန်မှာ လိုင်းကားတွေကို ဂိတ်ကနေ တစ်စီးချင်းစီလွှတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ကာ လာတဲ့တစ်စီးကိုပဲ အတင်းလုယက်တက်နေကြရတာရယ်၊ နောက်တစ်စီးဘယ်တော့လာမလဲ မသိဆိုတာရယ်ကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားက လိုင်းကားတွေ စီမံခန့်ခွဲပုံတွေအတိုင်း ကောင်းမွန်အောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မှတ်တိုင်မှာ ဘယ်လိုင်းက ဘယ်ကား ဘယ်အချိန်မှာရောက်မယ်ဆိုတာ ကြည့်ပြီးတော့ စောင့်ရုံပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ စည်းကမ်းဖောက်ပုံနဲ့တော့ အဲဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။
ဆိုတော့ကာ.. ဂိတ်ကနေ နှစ်စီးစီ တစ်ခါ လွှတ်ပေးမယ်၊ တစ်စီးကို ရောရာအတွက်၊ နောက်တစ်စီးကိုတော့ အမျိုးသမီးသီးသန့်ဆိုပြီး လိုင်းတူတာနှစ်စီးစီ လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ အဲလိုလုပ်လို့ ကားသမားတွေက ပူညံလုပ်ချင်လုပ်မှာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ယာဉ်လိုင်းအနေနဲ့ စည်းကမ်းထုတ်ပြီးတော့ လုပ်မယ်၊ မလိုက်နာနိုင်တဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေ လိုင်းကထုတ်ပါယ်တဲ့ထိ အရေးယူမယ်ဆို မကောင်းပေဘူးလား။ သေသေချာချာတွက်ကြည့်ရင် အမျိုးသမီးသီးသန့်ကားက ရောရာထက်တောင် ပိုက်ဆံပိုဝင်ဦးမယ်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ပြီးက နိုင်ငံကြီးလိုပဲ၊ လမ်းတွေကလဲပေါက်ပြဲ၊ တိုက်တွေကလဲ အိုဟောင်း၊ ဆေးတွေကွာနဲ့ လမ်းမပေါ်မှာလဲ ဈေးသည်နဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေပဲ များနေတာ။ စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆို တစ်ကယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ယာဉ်လိုင်းသီးသန့်ထောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ လက်ရှိယာဉ်လိုင်းများနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ပြောမယ့်သာပြောရတာ၊ ကိုယ့်လူမျိုးအကြောင်းလဲ ကိုယ်သိနေတော့ လျှာရှည်တဲ့ကိုယ့်လက်ကို ကိုယ် ပြန်အပြစ်တင်ချင်တယ်။ ပြောလဲပြောတာပါပဲ၊ ပြောတိုင်းလဲ ပြောတဲ့သူကပဲ ပြောတယ်ဖြစ်တယ်။ ပြော မပြောချင်တော့ဘူး။ ဂယ်ဘဲ။
အမျိုးသမီးဒရိုင်ဘာတွေ တရုတ်ပြည်မှာတော့ ပေါပေါပဲ … ဘက်စ်ကားကြီးတွေရော တက်စီတွေမှာရော … ကျွန်မတော့ ယောက်ျားဒရိုင်ဘာမောင်းတဲ့ကားကိုပဲ ရွေးစီးတယ် … အတွေ့အကြုံအရ မိန်းမတွေက မကျွမ်းကျင်တတ်ကြလို့ပါ (ကိုယ်တွေ့) … ဒါတောင်မှ လမ်းတွေအရမ်းကောင်းနေတာ …
မြန်မာပြည်လိုနေရာမှာဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးဘက်စ်ကားမောင်းဖို့ မလွယ်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ် …
ဆြာဝေပြောတာတော့ ထောက်ခံသွားတယ်ဗျို့ ……………
စင်္ကာပူမှာ လို လက်သရမ်းသူ ကြိမ် ဒါဏ် ။ ရွှေမြန်မာ တွေ အကျင့်မပျောက်လို့ ၁၉၉၅~`၆ လောက်မှာ တစ်ယောက် စော်ခံထိလိုက်သေးတယ်။
သံဇကာ ခြားတာက ၁၉၇၆ ၀န်းကျင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ။ ၂စီးတွဲကတော့ မိန်းမ ယောင်္ကျား မခွဲဘူး ။ အခု BM ကားတွေမှာ သံဇကာ ခြားပြီး ကျားက ရှေ့ ၊ မ က နောက်က စီးရတာ။
ဆြာ ဂီ နည်းက အဖြစ်သင့် ဆုံးထင်ပါတယ်။
မဆလ လက်ထက်တုန်းက အလယ်ကသံစကာ ကာပြီးမိန်းခလေးသီသန့်
တစ်ခုကလေးပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလိုသီးသန့်လိုင်းပြေးဆွဲမယ်ဆိုရင် မာမီသော်တို့က ဘယ်ကားကို စီးရမှာလဲဟင်။ အတွဲလေးတွေ အလန်းလေးတွေနဲ့ အတူတူသွား ဘုရားဖူးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ။ အဖေနဲ့သမီး ၊ မောင်နဲ့နှမ ၊ အမေနဲ့သား ၊ ဦးလေးနဲ့တူမ ၊ ဒေါ်လေးနဲ့တူ တစ်ကွဲ တစ်ပြားစီ ဘုရားဖူးသွားရမှာလားဟင် ။ ပိုလို့ စိတ်မချရဘူးဖြစ်ကုန်ရင် ခက်ရချည်ရဲ့။ ရွာက အဘွားတို့ ညီမလေးတို့ တူမလေး တို့ ကို ဘုရားဖူးလိုက်ပို့ရင် ပိုလို့ ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြမယ်ထင်တယ်။ကားနဲ့ ခရီးသွားတဲ့ လူဦးရေ မမျှလို့။ နံနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်း ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်တွေ တိုက်နေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကားတွေအသစ်တင်သွင်း ခွင့်နဲ့ ၀န်ထမ်းများကို ကားတစ်ယောက်တစ်စီးစီ အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ပေးနိုင်ရင်ပို ကောင်းမှာပါ။ တစ်နည်းရှိပါသေးတယ်။ နိုင်ငံတော်က ဟိုတုန်းကလိုမျိုး စီစဉ်ခဲ့တဲ့ တစ်အိမ်ထောင် ကားတစ်စီးပိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းက ကား ရောင်းဝယ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေကို ကားရောင်းတဲ့ အခါ ကားဈေးနှုန်းရဲ့ တန်ဖိုး တစ်ဝက်ကို ( အဆိုင်း )နဲ့ ကျန်တစ်ဝက်ကို အရှုံးခံပြီး ( တစ်ဝက်ဆိုင်း/တစ်ဝက်ရှုံး ) စနစ်နဲ့ ရောင်းပေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ထောက်ခံဘာဒယ် .. ထောက်ခံဘာဒယ်
ဟီနိူးဘွတ်စ်ကားမှာ ကျားမ သံဇကာခြားတာ ငယ်စဉ်က မှီလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ မရှိတော့ပြန်ဘူး။ ခရီးသည် မတန်တဆများလာတော့ လူများများတင်နိုင်ဖို့ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရပုံ ရတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးဗူးချုပ် နြှီားအင်ဇာဂီ ပြောပြီးထားတာ အတော်ပြည့်စုံသလောက် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆို လက်တွေ့မကျဘူး။ နောင်လဲ ကျဖွယ်ရမရှိဘူး။ အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်၊ ရထားလိုင်းများကို အားထားနေရတဲ့ မီဂါစီးတီးတိုင်း ကြုံနေရတဲ့ ပြသနာပါ။
ဖြစ်သင့်တာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်လုပ်ရမယ်၊ သတင်းထုတ်ပြန် ပညာပေး အရေးယူပြရမယ်။ နိုင်ငံဂျားမှာတော့ ကွန်ပြူတာစနစ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးနိုင်လို့ ပြစ်မှုတခုဖြစ်ရင် တသက်စာ မှတ်တမ်းဝင်သွားပြီ။ အဲဒီလူ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ မြန်မာပြည်အနေအထားနဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များမှာ ဖော်ထုတ်အရေးယူတဲ့နည်း သုံးနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် လူတိုင်းတက်ဖတ်နိုင်တဲ့ အစိုးရဆိုက်မှာ မှတ်တမ်းတင်ပြထားလိုက်လည်း ဖြစ်တယ်။ အဲသလို လုပ်ပြန်တော့လည်း ယောက်ျားများကို ငွေညှစ်ဖို့ ထောင်ဖမ်းသူများ ရှိလာမှာကို ထည့်တွက်ရအုံးမယ်။ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကကြည့်ရင် ဘယ်အတိုင်းအတာကို အထောက်တော်လို့ သတ်မှတ်မှာလဲ။
နောက်တချက်က နိုင်ငံတကာသတင်းထဲ ပါလာရင် တိုင်းပြည် နစ်နာတယ်။ ဖတ်သူက အားလုံးကို သိမ်းကြုံးကောက်ချက်ဆွဲမှာ။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ အခုလိုပဲ စီစဉ်တော့ စိတ်ထဲမှာ မနှစ်မြို့ဖြစ်မိတယ်။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေဆို ပိုဆိုးမယ်။ နိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ကျားမခွဲခြား ဆက်ဆံတာ သိပ်အောက်သွားပြီ။ အစိုးရ မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ တပွဲထိုး စီမံချက်ထက် ရေရှည်ရေတို စီမံကိန်းများနဲ့ ဖြေရှင်းပေးရမယ်။ ခါးပိုက်နှိုက်ကိစ္စလည်း သည်လိုပဲ။ ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပဲ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုနဲ့ ရောယှက်ထားတော့ ရဲလည်း ရဲအလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ဟိုက် အိုက်ဒါဆိုရင်တော. ဒွတ်ခပဲဗျ
ကိုယ်.ကောင်မလေးနဲ. လျောက်လည်ချင်ရင်တောင် တူနှစ်ကိုယ် လက်ကိုတွဲလို.မရတော.ဘူးလေ မယ်က အဓိပတိနဲ.ဆို မောင်က မထသနဲ.သွားရတော.မှာပေါ.
ကွန်မန့်များဖတ်ပီး စဉ်းစားမိတာကတော့ ဘတ်စ်ကားတိုင်းမှာ စီစီတီဗွီ တပ်ထားရင်ကောင်းမလားဘဲ။ မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူမှန်သမျှ ငြင်းလို့မရတော့ဘူး။ အရေးယူတာခံဖို့ဘဲ ရှိတယ်။
အဓိကပြသနာကတော့ ဘက်စ်ကားကျပ်တာပါပဲ.. ချောင်ချောင်ချိချိစီးရရင် ဘာလုပ်လို.ရမှာလဲ. ပြီးတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိတဲ့ အမျိုးသမီးသီးသန်. ဘက်စ်ကားလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ ကမ္ဘာမှာ ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံမှာ တဏှာရူး ပေါပါတယ်လို. ကြော်ငြာသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ ကြည့်လဲလုပ်ကြပါအုံးဗျာ…
ဘယ်နှယ့်ကြောင့် ဘက်စ်ကားတွေ ကြပ်ပိတ်သိပ်နေတာ မဖြေရှင်းပဲနဲ. အမျိုးသမီးသီးသန်. ဘက်စ်ကား စီစဉ်မယ်ဆိုတော့ နဲနဲများ စိတ်ကူးယဉ်စံနေလားမသိပါဘူး…. အဲလို အကြံပေးတဲ့သူကို မေးကြည့်ပေးပါအုံး သူ.အမျိုးသားနဲ. သူနဲ. ဘက်စ်ကား စီးရင် ခွဲစီးမလားလို.လေ… ဟေဟေ
စင်္ကာပူမှာ ၁၉၈၂ `~၈၃ လောက် က လိုင်းကားကြပ်တာတွေ ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းတစ်ခု လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက MRT စင်္ကာပူမှာ မရှိသေးဘူး ။
ကားကြပ်တဲ့ ရုံးတက်ချိန်မှာ CBD (Central Business District) ထဲကို ၀င်မဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကားတိုင်းမှာ ယာဉ်မောင်း အပါအ၀င် လူ အနည်းဆုံ ၃ ဦးပါရမယ်။ မပါရင် ၀င်ကြေး ပေးရတယ် ။ ကားကောင်းကြီးတွေ စီး ပေမဲ့ ကပ်စီးနဲလို့ အဲ့ ဒီ့ ၀င်ကြေး မပေးချင်လို့ဘဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ချင်းစာလို့ဘဲလားတော့ မသိဘူး၊ မြို့ထဲဝင်မဲ့ သူ တွေကို ကားကြုံ ခေါ်တင်သွားကြတယ်။
ကားကြုံ စီးမဲ့သူတွေ က pick up point လေးတွေ မှာ ဆောင့်ပြီး ကားတွေက ဘယ်သွားမလဲ မေးပြီး လမ်းတူရင် ခေါ်တင်သွားတယ်။
လိုင်းကားကြပ်တာတွေရော ကားကြပ်တာတွေ ပါ သက်သာအောင် ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ခြံကားသားတွေလာလို့ ဘာလို့ မိန်းမကား ယောင်္ကျားကား ခွဲထားသလဲဆိုရင်
ထောက်လှမ်းရေး ရှိလို့လို့ ဖြေရမှာပေါ့နော် …ဒါဆို တားတားတို့အားလုံးက ထောက်လှမ်းရေးစာရင်း ၀င်သွားပြီပေါ့နော်…
မိန်းမကားမှာ မစီးပဲ ယောင်္ကျားကားမှာ အဆင်ပြေသလိုစီးတဲ့ ဒေါ်ဒေါ် မမ ညီမလေးများဆိုရင်လဲ အလှူ့အမလို့ ခေါ်ရမလို ဖစ်နေပီ …
မထင်မထင် … ဖစ်လာလိမ့်မယ် မထင် …။
သေချာပါတယ် ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး သားအမိနှစ်ယောက်ဆိုရင် သားနဲ့အမေက တကွဲစီ လင်နဲ့မယားလမ်းအတူသွားမရ လှုထားတဲ့အလှုငွေပြန်ယူပြီးအကျိုးရှိမဲ့နေရာမှာလှုဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်
အခုလဲ ထိုင်စီးပဲတင်တဲ့ လိုင်းတွေရှိနေပါတယ် အဲ အစပိုင်းပေါ့ နောက်တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ ပါရမီ လိုင်းအချို့ တော့စည်းကမ်းကောင်းကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းမကောင်းကြတဲ့ အချို့တော့ရှိကြတာပေါ့
အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတဲ့ အကောင်ကို ဘတ်စ်ကားပေါ်တွေ့ရင် ဝိုင်းထောက်ကြကွာ။… :mad:
သူ့အတွက် အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ပြောတယ်ထင်ပါတယ်
ဘာတဲ့… ထိုင်စီးပဲတင်တဲ့လိုင်းတဲ့၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ မှန်ပါတယ်၊ Taxi ဆိုတဲ့လိုင်းကကောင်တွေ ဘယ်တော့မှ အတွယ်တွေ၊ မတ်တပ်ရပ်တွေ မတင်ပါဘူး။
ပါရမီလိုင်းတစ်ချို့ စည်းကမ်းကောင်းကြပါတယ်တဲ့၊ ဟုတ်ပါကြောင်း၊ မှန်ပါကြောင်း၊ အဲကွန်းတပ်၊ ထိုင်ခုံပြည့်သာတင်ပြီး သူများတွေ ၅၀ ခေတ်ကတည်းက ၂၀၀ တောင်းစားလာကြတာ ခုလို အဲမွန်းမပါ၊ ထိုင်ခုံမှာ ဘယ်တော့မှထိုင်မစီးရတဲ့အချိန်မှာလဲ ၂၀၀ အောက် တစ်ပြားမှ မလျော့တဲ့နှူန်းနဲ့ ပြေးဆွဲပေးနေပါကြောင်း။ စည်းကမ်းလိုက်နာချက်များတော့
ပါရမီလိုင်းဆို ကြာရမည်လိုင်းလို့ ပြောင်းခေါ်နိုင်တဲ့ထိ မှတ်တိုင်စေ့ ကျောက်ချရပ်နားခြင်း၊ လမ်းကန့်လန့် ဘုကျကျ ရပ်နားခြင်း၊
ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့ကားစုတ်ကြီးတွေကြောင့် သွားရင်းလာရင်း နောက်တစ်စီးပြောင်းစီးရခြင်း၊
ဦးကြောင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သူ ထောက်လှမ်းပေးလိုက်ကြတာပဲကောင်းပါတော့တယ်
ဂယ်ပဲ၊ ပြော မပြောချင်တော့ဘူး။